Shariif & Guuleed oo taageeray Qorshaha Rooble Shirka Berri furmaya – XAMAR POST
Booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay Muqdisho
Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo maanta lagu qabanayo Dhuusamareeb.
Dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska oo muwaadiniintooda kala baxaya Wadanka Itoobiya .
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku dhawaaqay in dalku galay xaalad bani’aadminimo oo deg deg ah.
Sawirro:-Madaxweynaha Puntland oo tababar usoo xiray Ciidamo Boolis ah.
Yaasiin faray oo ka mid noqday xubnihii maanta lagu diiwaan-geliyay Dhuusamareeb.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo bogaadiyay Guddiyada Doorashooyinka, kuna baaqay…
Shariif & Guuleed oo taageeray Qorshaha Rooble Shirka Berri furmaya
By Mohamed Abdi On May 19, 2021
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo qabsoomidda shirka khamiista lagu balansanyahay ee looga hadlayo dhameystirka heshiiskii 17 September, si dalka ay uga dhacdo doorasho lagu wada qanacsanyahay.
“Waxaan rajeynayaa kulanka 20-ka bishan loo madlan yahay, kaas oo looga hadlayo dhamaystirka heshiiskii doorasho ee 17 September inuu noqdo mid mira dhal ah oo guulaysta si dalku u galo marxalad doorasho oo nabdoon, raallina laga wada yahay, taasoo fure u noqon doonta in lagu qanco natiijada Doorashada”.ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.
Dhinaca kale Murashax Madaxweyne C/kiriin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay Shirka loo madlan yahay 20-ka bisha oo ah shir ay dhamaan bulshada Soomaaliyeed iyo beesha Caalamkuba ka dhursugayaan inuu soo afmeeri doonno khilaafaadkii iyo kala aragti duwanaashahii hareeyay qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah, shirkaas ayaan waxaan u rajeynayaa inuu guuleysto, ayna ka soo baxaan go,aano horseedi kara in dalku ay ka dhacdo doorashadii mudada dheer la sugayey.
“Waxaan yadadiilo ka qabaa in dadaalada Ra’iisulwasare Rooble iyo xukuumaddiisa ee ku aadan najaxinta shirkaas iyo qabashada doorasho hufan ay mirro dhalaan. Anigoo dhicyadeena oo idilna ku boorinaya in la muujiyo dabacsanaan iyo tanaasul suurto galin kara qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah laguna kalsoonaan karo hufnaanteeda..
DHAGEYSO: Muuse Biixi “Soomaaliya waan is deynay,ee naga leexda”
Qarax lagu dilay Taliyihii Ciidanka Gudoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe
Mohamed Abdi Nov 25, 2021
Booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay…
Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo maanta lagu qabanayo…
Dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska oo muwaadiniintooda kala baxaya…
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku dhawaaqay in dalku galay xaalad…
Sawirro:-Madaxweynaha Puntland oo tababar usoo xiray Ciidamo Boolis…
Yaasiin faray oo ka mid noqday xubnihii maanta lagu diiwaan-geliyay…
Xubno ka mid ah golaha shacabka oo maanta lagu dooranayo Muqdisho
Guddiga Doorashada oo ku dhowaaqay in berri ay dhaceyso Doorashada lix…
Deni oo la kulmay saraakiisha ciidamada Puntland
Maamulka Gobalka Hiiraan oo lagu wareejiyay agab loogu talo galay amniga…
Mareykanka: Dhowr qof oo lagu dilay gobolka Wisconsin
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo booqasho rasmi ah ku jooga Turkiga
Madaxweynaha Galmudug oo Wakiilada Beesha Caalamka kala…
Dowladda Canada Oo kala baxaysa muwaadiniinteeda ku sugan…
Millateriga Suudaan oo qorsheynaya in dib loo soo celiyo…